Ndị agha ala Naịjirịa azọpụtago nwa Chibok ọzọ a tọọrọ
Ndị agha ala Naịjirịaazọpụtago nwata nwanyị Chibok ọzọ n’ime ụmụnwanyị karịrịnarị abụọ ndị Boko Haram tọọrọ n’obodo Chibok dị na Steeti Bọrọnu n’ọnwa Eprel afọ puku abụọ na iri na anọ.
Nke a bịara dịka o mechara otu ụbọchịazọpụtachara Amina Ali.
Onye na-ahụ maka mmekọrịta ọhaneze, bụ Kọlọnel Sani Usman, onye kwuputere nke a, kọwara na aha nwata nwanyị ahụ bụSerah Luka.
Nwaada Luka na-anara ọgwụgwọ n’ụlọọgwụ dị na Steeti Bọrọnu.
Onye isi ala Naịjirịa, Muhammadu Buhari, nọrọ na mbụ kwuo na a ga-azọpụta ụmụaka nwanyị ndị fọrọ afọ na ndụ
O kwere ụmụafọ ala Naịjirịa nkwa n’ọchịchị ya ga-eme ihe niile o nwere ike iji zọpụta ụmụaka ahụ n’aka ndị agha iyi egwu Boko Haram.